Mofon’aina – ZOMA 21 APRILY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ZOMA 21 APRILY 2017
21 aprily 2017
18 Fa ny teny ny amin’ ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’ izay ho very, fa herin’ Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena.19 Fa voasoratra hoe: Hofoanako ny fahendren’ ny hendry, Ary holaviko ny fahalalan’ ny mahalala.20 Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin’ izao tontolo izao? Tsy nampodin’ Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren’ izao tontolo izao?21 Fa satria, na dia naseho aza ny fahendren’ Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an’ Andriamanitra, ka dia ny fahadalan’ ny fitorian-teny no sitrak’ Andriamanitra hamonjeny izay mino;22 fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena,23 fa izahay kosa mitory an’ i Kristy voahombo tamin’ ny hazo fijaliana, dia fahatafintohinana amin’ ny Jiosy ary fahadalana amin’ ny jentilisa,24 fa amin’ izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy, Izay herin’ Andriamanitra sy fahendren’ Andriamanitra.25 Fa ny fahadalan’ Andriamanitra dia hendry noho ny olona; ary ny fahalemen’ Andriamanitra mahery noho ny olona.
1 KORINTIANA 1 :18-25
NY HERIN’ ANDRIAMANITRA
1-Ny teny ny amin’ny hazo fijalian’i Jesoa Kristy
Endrika telo no aseho eto ho fampitana ny famonjen’ Andriamanitra. Ny teny ny amin’ny hazo fijaliana (and 18). Ny hafatry ny Tompo ny amin’ny hazo fijalian’i Kristy dia hery ho famonjena izay mino (and 21). Ny farany dia ny toriteny (and 23). Mamonjy ny olona mpanota i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny teniny ary amin’ny alalan’ny toriteny. Nifidy ny teniny ary amin’ny alalan’ny toriteny Andriamanitra mba ho fantsona hampitana ny famonjena ny olombelona mpanota. Asain’ny Tompo àry isika ho vavolombelon’ny hazo fijaliany. Ambarao ny Tenin’ Andriamanitra momba ny hazo fijaliana.
2-Jesoa Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana
Jesoa Kristy nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana hisolo heloka antsika olombelona no Mpamonjy. Maneho ny hery sy ny fahendrena ary ny fitiavan’ Andriamanitra ny fisian’ny hazo fijalian’i Jesoa Kristy. Ny fahendren’ Andriamanitra sy ny heriny dia ny nahafoizany ny zanany sy ny fankatoavan’i Jesoa Kristy ny Ray. Tsy mitondra ho amin’ny fahalalana an’ Andriamanitra mihitsy ny fahendrena tamin’ny ady teny sy ny fahaiza-miteny sy mandresy lahatra araka ny fomba Grika tany Korinto. Ny finoana ny Tenin’i Jesoa Kristy no famonjena ny olona rehetra, na Grika na ny Jiosy ary ny mpino. Mandehana àry ento sy ambarao ny teny sy ny hafatra ary torio i Jesoa Kristy, hery sy fahendren’ Andriamanitra (and 25).
Inona no ambaran’ny hazo fijalian’i Kristy aminao ?
Mofon'aina - TALATA 25…